搜索 Abhivadana 的结果：
（က） မြွက်-ဆို-ချီးမွမ်း-ခြင်း။ （ခ） ＇ငါ၏ ဥစ္စာ，ငါ，ငါ၏အတ္တ＇ဟု သက်ဝင်-စွဲလမ်း-၍-မြွက်-ဆို-ခြင်း။ （ဂ） သက်ဝင်-ကျွံ-နစ်-၍-ဖိနှိပ်၍-မြွက်-ဆို-ငြင်းခုန်-ပြော-ဟော- ခြင်း။ （ဂ） အဘိဝဒနကိရိယာ，အဘိဝဒတိ-（ခ）-ကြည့်။
abhivādana：n. [cf. abhivādeti] 恭敬的致意，敬禮，問訊.
abhivādana：n. [cf. abhivādeti] 丁寧な 挨拶，敬礼，問訊.
Abhivādana，【中】 abhivādanā，【阴】 致敬，行礼。（p36）
Abhivādana，【中】abhivādanā，【阴】致敬，行礼。《法句经》Dh.v.109︰Abhivādanasīlissa niccaṁ vuḍḍhāpacāyino cattāro dhammā vaḍḍhanti：āyu，vaṇṇo，sukhaṁ，balaṁ.（好乐敬礼者，常尊於长老，四法得增长：寿.美.乐与力。）南传比丘受人礼拜时，常念诵的法句。法句中寿.美.乐.力，指长寿、庄严、安乐、力量。《摩奴法典》Ch.1.121︰「养成尊敬的习惯和常尊敬长者，它们寿命、学问、名誉和力量，四样一定会增长。」
[abhi+（1） vadī+ṇe+yu. （2） vada+ṇe+yu. nīti，dhā. vadī-，315-） abhivādetvā-.]
[အဘိ+（၁） ဝဒီ+ဏေ+ယု။ （၂） ဝဒ+ဏေ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။ ဝဒီ-ဓာတ်၊၃၁၅-ကြည့်） အဘိဝါဒေတွာ-လည်းကြည့်။]
abhivādana：[nt.] salutation； bowing down.
Abhivādana，（nt.） [fr. abhivādeti] respectful greeting，salutation，giving welcome，showing respect or devotion A.II，180； IV，130，276； J.I，81，82，218； Dh.109 （°sīlin of devout character，cp. DhA.II，239）； VvA.24； Sdhp.549 （°sīla）. （Page 69）
ABHIVĀDANA：[nt] --nā [f] sự làm lễ，sự vái chào，sự cúi mình xuống
（၁） （က） ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ရိုသေစွာ ရှိခိုးခြင်း။ （ဆရာကို မြင်၍ ရှိခိုးခြင်း，ဆရာရှိရာအရပ်ကို-မျက်နှာမူ-ရည်စူး-လျက်ရှိခိုး၍ သွားခြင်း，ရပ်ခြင်း，ထိုင်ခြင်း，လျောင်းခြင်းသည်လည်း ရိုသေစွာ ရှိခိုးခြင်းမည်၏）။ （ခ） ရှိခိုးစေ၏၊ သူတစ်ပါးတို့ကို မိမိအား ရှိခိုးစေခြင်း။ （၂） မြွက်-ဆို-စေကြောင်းဖြစ်သော၊ ＇ချမ်းသာစေသတည်း＇ဟု-မြွက်-ဆို-စေကြောင်းဖြစ်သောအရာ၊ ရှိခိုးခြင်း။
ရိုသေစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း။ ရိုသေခြင်း။ ရှိခိုးခြင်း။အဘိဝါဒေတိ
abhivādanā，（f.），salutation； bowing down.
与 Abhivadana 相似的巴利词：